FARMAAJO oo xil sare u magacaabay sarkaalkii uu feeri gaaray Darboweyne - Caasimada Online
Home Warar FARMAAJO oo xil sare u magacaabay sarkaalkii uu feeri gaaray Darboweyne
FARMAAJO oo xil sare u magacaabay sarkaalkii uu feeri gaaray Darboweyne
Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoomiyihii Maxkamadda Sare ee Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya Gaashaanle Sare Liibaan Cali Yarow ayaa xil ka qaadis lagu sameeyey.
Xilka Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxaa loo magacaabay Maxamuud Axmed Xasan (Dalab), oo kasoo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Guddoomiyaha Cusub ee Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ayaa waxaa loo dalacsiiyey darajada Gaashaanle Sare ka hor inta aan xilka loo magacaabay.
Maxamuud Axmed ayaa horey usoo noqday wasiirka Ganacsiga Xukuumaddii uu Ra’isul wasaaraha ka ahaa Cabdi Faarax Shirdoon Saacid.
Mudane Dalab ayaa ayaa ka tirsanaa taliska Booliska, wuxuuna horey ula soo shaqeeyey maxkamaddii badbaadada ee uu guddoomiyaha ka ahaa Jen. Maxamuud Geelle Yuusuf.
Guddoomiyaha xilka laga qaaday ee Liibaan Cali Yarow ayaa waxaa xilkaan loo magacaabay 23 September ee sanadkii 2014 xilligaas oo uu madaxweyne dalka ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud.
Maxamuud Axmed Xasan (Dalab) ayaa waxaa si aad ah loogu xusuustaa inuu ahaa nin isaga oo ka hadlay xaflad ka dhacday Muqdisho uu dharbaaci gaaray Muxudiyadiin Darboweyne oo kasoo jeeda Muqdisho, kadib markii Dalab uu sheegay hadal uusan Darboweyne oo ku saabsan maqaamka Muqdisho. Hoos ka daawo dhacdadaas.